Warshadda Filter Karti Dhexdhexaad | Shiinaha Soosaarayaasha Filter Waxtarka Dhexdhexaad, Shirkado
bacda hawo nadiifinta waxtarka dhexdhexaadka ah ee filterka fiber synthetic
Miiraha wuxuu qaataa faytka synthetic filterka aan-tolmo lahayn (shaandhada waxay bixisaa waxtarka 60-65%, 80-85%, 90-95% iyo kuwa kale), ka dib marka la mideeyo, waxay leedahay waxtarka sifeynta sare, awoodda haynta boodhka weyn, iska caabinta hooseysa, kharashka hawlgalka oo hooseeya iyo astaamo kale. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay in lagu nadiifiyo hawada qalabka wax lagu nadiifiyo ee nidaamka hawo-qaboojinta guud, nidaamka nadiifinta hawada iyo buufinta nidaamka saadka hawada, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa miiraha hore ee shaandhada waxtarka sare si loo kordhiyo nolosha adeegyadeeda. Heerkulka guud ee adeegsiga ayaa ka yar 80 darajo. Waxaa jira laba taxane ah oo walxaha soohdinta ah: qayb isku laabma galvanized iyo aluminium daawaha.
v-nooca waxtarka dhexdhexaadka ah v filter air air
Miiraha ayaa ansixinaya shaandhada V-BANK ee waxqabadka dhexdhexaadka ah (miiraha ayaa bixiya waxtarka
60-65%, 80-85%, 90-95% iyo kuwa kale), ka dib markii la sameeyo, waxay leedahay waxtarka sare, awoodda haynta boodhka weyn, awoodda sifeynta hawada ee waaweyn iyo astaamo kale. Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay nadiifinta hawada ee habka guud ee qaboojiyaha, nidaamka sifaynta hawada iyo buufinta nidaamka sahayda hawo nadiifka ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in la sifeeyo hore loo sifeeyo shaandhada waxtarka aalladda si loo kordhiyo nolosha adeegga. Heerkulka guud ee adeegsiga ayaa ka yar 80 darajo.